आज राति ययति उल्का बर्षा ! ⋆ Nepal Astronomical Society - NASO
मितिः साउन २८, २०७७
स्विफ्ट टटल नामक पुच्छे्रताराका कारण हुने उल्कावर्षा यस वर्ष अगष्ट १२ राती देखि अगष्ट १३ को बिहानसम्म अत्याधिक मात्रामा देखिने छ । ती उल्का वर्षाको स्रोत पर्सियस (ययाति) तारामण्डलमा भएको जस्तो देखिने हुनाले यसलाई पर्सिड मिटियर सावर नाम दिइएको छ ।
स्विफ्ट टटल अहिले पृथ्वीको नजिक छैन । स्विफ्ट-टटलले सुर्यको एक पटक परिक्रम गर्न १३३ वर्ष लगाउछ । तर यसले सूर्यको परिक्रमा गर्ने क्रममा सूर्यको नजिक आइपुग्दा आफ्नो कक्षमा धुलोका कण र चट्टानहरु छोड्ने गर्दछ । जब पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्ने क्रममा पुच्छे्ताराको उक्त कक्षको नजिक आइपुग्छ, तब ती धुलोका कणहरु र चट्टानहरु पृथ्वीको वायुमण्डलमा तीब्र गतिले ठोक्किएर जल्दछन् । यसैलाई हामी उल्का वर्षा भन्दछौं । उल्का वर्षालाई नेपाली जनजिब्रोमा ‘तारा खसेको’ पनि भनिन्छ ।
उल्का वर्षा स्थानीय समय अनुसार १२ अगस्टको राती १०:३० बजे देखि अगस्ट १३ बिहान ५ बजे सम्म देख्न सकिनेछ । तर अत्याधिक मात्रामा भने अगस्ट १३ बिहान ३-४ बजे देख्न सकिनेछ । यस वर्ष त्यस बेला प्रति घण्टा एक सय पचास वटासम्म उल्का वर्षा देख्न सकिने अनुमान गरिएको छ । ती उल्का वर्षाहरुको गति प्रति सेकेण्ड ६० कि.मि. सम्म हुने भएकोले करिब ७० कि.मि. माथि वायुमण्डलमा घर्षण पैदा भई यस्तो दृश्य देखिन्छ ।
स्विफ्ट टटल १८६२ जुलाईमा अमेरिकन खगोलविद् द्वय लेविस स्विफ्ट (१८२०–१९१३) र होरस टटल (१८३८–१९३३) द्वारा पत्ता लगाइएको पुच्छ्रेतारा हो । ले विस सन १९९२ म सुर्यको नजिक आएको यो पुच्छ्रेतारा अब सन २१२५ मा मात्र नजिक आउनेछ। हाल यो पुच्छ्रेतारा पृथ्वीको नजिक छैन तर यसले आफ्नो कक्षमा छोडेका चट्टान र धुलोका कणहरु पृथ्वीको वायुमण्डलमा तीव्र गतिले प्रवेश गर्दा घर्षण भई जल्दछन् । यसलाई नै उल्कावर्षा भनिएको हो ।
इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमिकल युनियन